फर्जि मत भेटिएपछि कांग्रेसको मतगणना स्थगित « Image Khabar
फर्जि मत भेटिएपछि कांग्रेसको मतगणना स्थगित
४ मंसिर २०७८, शनिबार १५:४४
पर्वत, मंसिर ४ । नेपाली कांग्रेस पर्वतको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन अन्तर्गत क्षेत्र नं. १ मा मतगणना स्थगित भएको छ ।
गयराती सम्पन्न मतदानपछि मुचुल्का गरेर शिल लगाईएका बाकसमा खसेको मतभन्दा बढि भेटिएपछि मतगणना स्थगित भएको हो ।
क्षेत्र नं. १ मा रहका कुल ६४२ मतदाता मध्ये ६२० मत खसेको थियो । मतगणनाका लागि आज बिहान १० बजे सिल खोलेर मतपत्र गन्ने क्रममा ६ सय २४ मत पुगेपछि विवाद भएकको हो ।
मतदान अधिकृतको सहिछाप बिनाका मत भेटिएपछि विवाद बढेको हो । क्षेत्र नं. १ को नेतृत्वका लागि कृष्ण केसी र राजकुमार क्षेत्रीको छुट्टाछुट्टै समुह प्रतिस्पर्धामा रहेको छ । फर्जि मत देखिएपछि सभापतिका उम्मेदवार कृष्ण केसी मतगणना स्थलवाट बाहिनिुभएको छ ।
अहिले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि प्रयास भैरहेको छ । केसीले भने धादली भएको भन्दै पुनः निर्वाचनको माग गर्नुभएको छ । निर्वाचन अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले छापाखानावाट मतपत्र ब्याण्डिङ गर्ने क्रममा कमजोरी भएको बताउनुभयो ।
मतपत्रमा नम्वर हान्ने क्रममा केहि दोहोरीका तथा अर्धकट्टीमा नम्बर नहानिएका कारण समस्या पैदा भएको उहाँको भनाई रहेको छ । निर्वाचन समितिले ६ सय ५० मत छाप्न दिएको थियो । ती मध्ये ४ वटा अर्धकट्टीमा नम्वर नहानिएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
अहिले निर्वाचन समितिले उक्त विषयका बारेमा दुवै उम्मेदवारलाई जानकारी गराउने र सहमतिकको प्रयास गरिरहेको निर्वाचन अधिकृत शर्माले बताउनुभयो । उहाँले पुनः मतदानको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । उता क्षेत्र नं. २ मा भने अहिले मतदान जारी रहेको छ ।